Ifulethi langoku kwindawo ezivayo kufutshane neVienna
Innermanzing, Niederösterreich, Austria
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguKarina
Yonwabela iintsuku zokuphumla zokuphumla :)
Indawo yethu yokuhlala ikwindawo ezolileyo, eluhlaza kwindawo yokuhlala eWienerwald yaseNeustift-Innermanzing. Ngenxa yokuba kufutshane kwe-motorway ye-A1 (malunga ne-5 km), kukho uqhagamshelwano olulungileyo. Malunga nemizuzu engama-20 ukuya kwimida yedolophu yaseVienna
Dlala igalufa kwi-Atzenbrugg malunga ne-20 min
St. Pölten malunga nemizuzu engama-20 kude
Le ndlu inomnyango wayo wangaphandle kwaye ibonelela ngokuphila ubomi obutofotofo ukuya kuthi ga kubantu abane malunga ne-60 square metres! UKUPAKA MAHHALA
Indlu inokufikelelwa ngokungena kwayo (ingqalelo: izitepsi zangaphandle AKUKHO mlwelwe !!!) kwaye inikezela ubomi obutofotofo bemihla ngemihla ukuya kuthi ga kubantu abane malunga ne-60 square metres:
Igumbi lokuhlala elipholileyo elinesitovu saseSweden,
Vula ikhitshi yesicwangciso / indawo yokutyela enefriji kunye nomatshini wokuhlamba izitya, umatshini weNespresso, izitya ezikhoyo.
Igumbi lokulala elahlulwe ngokubonakalayo,
I-sofa yokukhupha kwindawo yokuhlala yenza ukuba abantu abane bahlale ubusuku bonke
Igumbi lokuhlambela / indlu yangasese eneshawari ephangaleleyo
Ibalcony epholileyo ikumema ukuba uphumle
Uhamba ngesithuthi sakho, sinendawo yokupaka.
Kukho iindlela ezininzi zokuhamba kunye nokuhamba ngebhayisekile, idama lokuqubha kunye namabala ezemidlalo kwindawo ekufutshane.
Iindawo ezintle kakhulu zohambo:
UMariazell kunye neAlpine Foreland
Wein- und Waldviertel (iinqaba kunye neebhotwe zindwendwela)
Uluntu oluzivayo lwe-Innermanzing lubonelela ngekhefi epholileyo, indawo yokutyela elunge kakhulu yamaTaliyane okanye ii-inns ezinokutya kwengingqi kumgama wokuhamba. Iindlela zokuhamba ezinomdla, iindlela zokuhamba, iindlela zebhayisekile zikwindawo ekufutshane. Iphuli ye-adventure enedama lendalo, ibala lokudlala labantwana kunye nenkundla yentenetya kukuhamba nje imizuzu embalwa.
Ukusondela kwihotele yesemina iLengbachhof inomdla. Indawo yegalufa yaseAtzenbrugg inokufikelelwa malunga nemizuzu engama-20 ngemoto.
Umbuki zindwendwe ngu- Karina
Siyavuya ukubakho xa sifika. Emva koko, iindwendwe zinokonwabela iintsuku zazo zeholide ngokukhululekileyo. Kodwa inokufumaneka ngefowuni.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Innermanzing